India: Fadin-tseranana sy fialan-tsasatra | Vaovao momba ny dia
India firenena nentin-drazana izy io, ary ny fetin'izy ireo sy ny fombany tsy ho ambany izy ireo. Hatramin'ny fahagola indrindra indrindra dia manana ny kalandriany manokana izy ireo ary isan-taona dia mankalaza ny tsirairay amin'ny fetibe ankalazany izy ireo, toy ny mitranga koa any Andrefana.
Raha te hahafantatra izay antokon'izy ireo sy ny fomba amam-panao mahaliana indrindra ianao dia mijanona ary vakio miaraka aminay ity lahatsoratra ity. Ary raha mbola te hahalala bebe kokoa momba ity firenena tsara tarehy sy maro karazana ity ianao, aorian'ny famaranana dia vakio ny lahatsoratray omaly: "India: Finoana sy Andriamanitra".
1 Kalandrie indianina
2 Andro fialantsasatra indianina
2.1 Pongal - Janoary:
2.2 Fetin'ny Repoblika (26 Janoary):
2.3 Holi - martsa:
2.4 Mahavir Jayanti - Aprily:
2.5 Zoma / Paska tsara - aprily:
2.6 Baisakhi - Aprily:
2.7 Buddha Purnima - Mey:
2.8 Khordad Sal - Mey:
2.9 Id-ul-Fitr - Jona:
2.10 Id-ul-Zuha - Aogositra:
2.11 Muharram - Septambra:
2.12 Gandhi Jayanti - Oktobra:
2.13 Diwali / Deepawali - Novambra:
2.14 Alin'ny Krismasy - 24 Desambra:
El taona indianina dia ahitana ny totalin'ny Gara 6, iray isaky ny roa volana, fa tsy ny telo toy ny amin'ny kalandrie andrefana:
Na izany aza, herinandro indiana mifanojo amin'ny herinandro andrefana, satria 7 andro koa izao:
Andro fialantsasatra indianina
Eto izahay dia milaza aminao hoe inona ireo fankalazana lehibe mitranga any India isan-taona. Hizara azy ireo isika araka ny volana.
Pongal - Janoary:
Volana hijinja izao, ary raha tsara ny vokatra, dia ankalazana hira sy dihy ary dihy no ankalazana azy ireo. India atsimo mankalaza ny fanombohan'ny 'Pongal' mandritra ny 3 andro misesy, izay mahandro vary vao mioty ary voarindra ny filaharan'ny omby. Miankina amin'ny faritra fantatry ny festival io amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa: any Asam dia fantatry ny 'Bhogali Bihu ' ary ho 'Makar Sankranti' any amin'ny firenena sisa.
Fetin'ny Repoblika (26 Janoary):
Amin'ity fetim-pirenena ity ny famoahana ny lalàm-panorenan'i India tamin'ny 1950. Ao an-tanànan'i New Delhi misy matso miloko sy mahavariana (tena mety amin'i India), izay misy ny zava-drehetra manomboka amin'ny fitaovam-piadiana farany ka hatramin'ny elefanta.
Holi - martsa:
Io no volana tsara indrindra amin'ny fety any India, satria izy ireo no be olona indrindra, be loko indrindra ary tsara tarehy indrindra koa. Manamarika ny faran'ny ririnina sy ny hatsiaka, mankasitraka ny fahatongavan'ny toetr'andro tsara ny olona ary mahatsiaro ho faly amin'izany. Asehon'izy ireo izany amin'ny alàlan'ny fandokoana ny endrik'izy ireo amin'ny loko ary koa ny vatany. Ity fankalazana ity dia zava-dehibe manerana ny firenena fa amin'ny tanànan'ny Vrindavan sy Maghura manokana.
El 'holi' izy io koa dia maneho ny fandresen'ny tsara amin'ny ratsy.
Mahavir Jayanti - Aprily:
Ny Jains dia mankalaza ny nahaterahan'i Vardhamana, ilay tirthankara faha-24, teraka 2.500 taona lasa tamin'ity festival ity.
Amin'ity andro ity dia mpivahiny maro no mitsidika ny Toerana Palitana sy Gimar any Gujarat.
Zoma / Paska tsara - aprily:
Andro fialantsasatra any India ny Kristiana mankalaza ny Paska toy ny amin'izao tontolo izao. Manomboka amin'ny Alakamisy ary mifarana amin'ny Alatsinainy, miaraka amin'ny lamesa manokana hankalazana ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty.
Baisakhi - Aprily:
Amin'ity festival ity dia ankalazaina ny fiandohan'ny taona Hindou ary misy hira sy dihy maro omena amin'ny anarany. ny 'sikhs' Manao fombafomba isan-karazany ihany koa izy ireo amin'ity andro ity ho fahatsiarovana ny tsingerintaona nanjakan'izy ireo tamin'ny maha mpirahalahy an'i Guru Gobind Singh.
Buddha Purnima - Mey:
Ny fahaterahan'i Guatama Buddha dia ankalazaina amin'ny faritra samihafa amin'ny firenena. Moanista bodista, miakanjo akanjo maro loko, mitarika filaharan'ny mpivavaka mitondra azy ireo lahatsoratra masina amin'ny finoana bodista.
Khordad Sal - Mey:
Iray amin'ireo fetibe lehibe indrindra any Parsis, izay iarahan'izy mianakavy. Amin'ity fialantsasatra ity no ankalazana ny nahaterahan'ny mpaminany Zarathustra.
Id-ul-Fitr - Jona:
Mandritra io fialantsasatra Silamo io dia am-bavaka sy ankalazana any amin'ny moske ny fiafaran'ny Ramadany, volana amin'ny fifadian-kanina amin'ny kolontsaina Silamo.
Id-ul-Zuha - Aogositra:
Mivavaka amin'ny moske manerana ny firenena ny Silamo ho fahatsiarovana ny sorona nataon'i Ibrahim.
Muharram - Septambra:
Fialantsasatra Silamo iray hafa izay ankalazain'ny vondrom-piarahamonina Shiita amin'ity tranga ity ihany. Ho an'ny maro dia fotoana fisaonana noho ny fahafatesan'ny maritioran'i Iman Hussain, zafikelin'ny mpaminany Muhammad. Ny filaharana miloko dia voarindra miaraka amin'ny replika ny fasan'i Hussain any Iràka.
Gandhi Jayanti - Oktobra:
Notsiahivina ny fahatsiarovana ny nahaterahan'ny rain'ny firenena, Mahatma Gandhi. Natao ny vavaka ho an'ny fiadanany ary anaovan'ireo mpikambana manan-danja amin'ny politika fehiloha mankamin'ny toerana nandorana azy tany New Delhi: Raighat.
Diwali / Deepawali - Novambra:
Fetin'ny jiro io, fankalazana lehibe indrindra sy mamiratra indrindra amin'ny rehetra any India. Mivory eny an-dalambe ny ankizy sy ny olon-dehibe mba hankafy ny afomanga mandritra ny alina. Jiro solitany, jiro ary labozia no manazava ny tranobe manerana ny firenena. Miangona miaraka amin'ireo namany sy mpiara-monina aminy ny fianakaviana mba hivavaka sy hankalaza.
Alin'ny Krismasy - 24 Desambra:
Toy ny amin'izao tontolo izao, ny kristiana any India dia mandeha amin'ny lamosin'ny mamatonalina hankalazana ny nahaterahan'i Jesosy Kristy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » India: Fomba amam-panao sy fety